Io Ramatoa 23 Taona Io No Nanokatra Ny Hopitaly Fanarenana Voalohany Tao India Ho An’Ireo Olona Tsy Matin’ny Fanafihana Tamin’ny Asidra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Avrily 2016 3:25 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, Ελληνικά, नेपाली, English
Ireo sisam-patin'ny fanafihana tamin'ny asidra sy ny mpiasa nandritry ny lanonana fanokafana ny Ivontoerana Fanarenana “Make Love Not Scars” (Fitiavana Atao/Aseho Fa Tsy Holatra). Sary: Avirat Sundra
Nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org ny 1 Aprily 2016 ity lahatsoratr'i Isis Madrid ity, ary naverina navoaka eto indray mba ho ampahany amin'ny fifanarahana fifampizaràna votoaty.
Tsy mpikatroka mahery fo foana akory i Ria Sharma hatrizay. Vao taona vitsivitsy lasa izay, nianatra momba ny lamaody tao amin'ny Sekolin-Javakanto Leeds izy. Saingy nahatsapa ho tsy nanana fitiavana ilay asa, ary nanapaka hevitra ny hirona amin'ny sarimihetsika. Ny tetikasany voalohany: Fanadihadiana iray mikasika ireo sisam-paty vokatry ny fanafihana tamin'ny asidra
“Nandritra ny nandraketako ilay fanadihadiana, tafiditra tao amin'ny efitrano irain'ny hopitalim-panjakana misahana ny fahamaizana aho”, hoy Sharma. “Nanova ahy mandrakizay ny zavatra hitako tao amin'ny efitrano teo ankaviako. Mbola tsy nanatri-maso fahoriana mafy sahala amin'izany aho hatrizay. Tsy mbla voahodidina fanaintainana betsaka tahaka izany. Raha ianao no teo amin'io toerana io dia nizara roa ny hevitrao, niverina tamin'ny fiainana mampahazo aina anao ianao na mandray fanapahankevitra hanavotra ary manome fiainana metimety koa ho an'ny hafa.”
Ankehitriny ity Delhiite, 23 taona mpisava làlana ity, dia nanokana ny fiainany ho amin'ny fanampiana ireo sisam-paty vokatry ny fanafihana tamin'ny asidra. Nanorina ny Make Love Not Scars izy tamin'ny taona 2014 mba hanohanana ireo niharam-boina, izay vehivavy avokoa ny ankamaroany. Ary ny 7 Martsa lasa teo, nanomboka ny voalohany indrindra amin'ny ivontoerana fanarenana ao India izy mba hanitarana ireo tolotra ho an'ireo sisam-paty vokatry ny fanafihana tamin'ny asidra.
Sharma (Havia) sy olona iray avotra, tao amin'ny LAnonana fanokafana ny Ivontoerana Fanarenana Make Love Not Scars. Sary: Avirat Sundra
Manohana ara-pahasalamana, araka ny lalàna, ara-tsaina ary ara-bola ireo sisa velona, ilay ivontoerana revolisionera ao New Delhi. Amin'ny fanolorany fahafahana manao yoga, tononkalo ary andianà fanohanana ara-pihetsehampo, ny ivontoerana dia toerana iray antenain'i Sharma mba hahazoana aina tsara ho an'ireo vehivavy niharan'ny fanafihana. Fanampin'ny fanomezana toerana azo antoka ho an'ireo vehivavy eo an-toerana mba hifamatotra rehefa mandray fitsaboana, fiofanana ary fanohanana avy amin'ireo mpiasa matianina, ahitana efitrano fatorian'ireo marary izay avy any ivelan'ny tanàna ihany koa ny ivontoerana.
Manolotra fiofanana arak'asa ihany koa ny Make Love Not Scars, atrikasa izay antsoin'i Sharma hoe “traikefa fahaiza-miatrika fiainana “, ireo torohevitra ara-pitsarana, ary ireo tolotra momba ny fahasalamana ara-tsaina.
Olana iray manerana izao tontolo izao ny fanafihana amin'ny asidra, nefa singanina manokana izany ho an'i India. Any, isantaona dia tombanana ho fanafihana 1.000 tamin'ny asidra no nanaovan'ireo vehivavy tatitra, matetika nataon'ilay nolavina na nataon'ny fianakavian'ireo nikasa haka vady azy. Na izany aza, tsy manao tatitra momba ireo fahavoazany ny ankamaroan'ireo vehivavy, mbola mitombo be ankehitriny ny isa araka ny voalazan'ny Mpiahy Iraisam-pirenena ireo Sisam-paty vokatry ny fanafihana tamin'ny asidra
Olona iray avotra tamin'ny fanafihana tamin'ny asidra, tao amin'ny lanonana fanokafana ny Ivontoerana Fanarenana Make Love Not Scars. Sary: Avirat Sundra
Ny asidra iray litatra, azon'ny rehetra raisina eny amin'ireo magazay manerana ny firenena, dia mora vidy eo amin'ny '33 cents’ eo ao India.
Hatramin'ny nijoroan'ny MLNS tamin'ny 2014, fantatr'i Sharma fa, ambony noho ny zavatra hafa, ilain'ireo olona tratran'ny fanafihana tamin'ny asidra ny fanampiana azy ireo hahazo fitsaboana. Manangona vola ho an'ireo olona avotra izay mila fanampiana amin'ny fandoavana ny saran'ny fitsaboana sy fisoloana tena araka ny lalàna izy sy ireo mpiara-miasa aminy. Raha azo atao, mandefa antso amin'ny governemanta Indiana koa ny MLNS mba hanome fitsaboana maimaimpoana.
Tamin'ny volana lasa i Sharma dia nahazo loka British Council International Alumni Award, natolotry ny Ben'ny tanànan'i Londona (Filankevitra Iraisampirenena Britanikan'ireo Nandalim-pahaizana fahiny tany). Saingy tsy làlana mora ny zotra mankany amin'ny tanjona ho an'i Sharma sy ireo mpiara-miasa aminy. Hatrany amboalohany, niady izy hanoherana ny fanavakahana araka ny taona sy ireo soatoavina manome vahana ny fanjakan-dehilahy misy eo amin'ny fianakaviana izay tsy manome lanja ny fahafahany ho tafita.
“[Tamin'ny voalohany], niady mafy izahay mba ho matotra tsara ny fandraisana azy”, hoy ny fanazàvany. “mafy ny fisarihana olona hino ny fomba fijerinao, satria, rehefa vita iny andro iny tsy misy olona te-hahatoky tanora izany hitantana ny volan'izy ireo.”
Ny lanonana fanokafana ny Ivontoerana Fanarenana Make Lova Not Scars. Sary: Avirat Sundra
Roa taona lasa izay, nahazo fankasitrahana iraisam-pirenena avy tamin'ny New York Times i Sharma sy ny fikambanany; nivondrona niaraka tamin'ireo goavan'ny dokam-barotra Ogilvy & Mather mba hamorona endrika sy hanangana ireo takelaby misy ireo antso manerana an'i Mumbai mikasika ny fisakanana fivarotana asidra, ary ankehitriny hita nahasarika fanomezana fanasàna goavana avy amin'ireo vondron'orinasa.
Saingy mbpola iainan'i Sharma ny fanavakavahana amin'ny resaka taona.
“Ady tsy mitsahatra ho ahy io,” hoy izy. “Aleoko aloha mandray ireo antso alohan'ny hanaikeko fihaonana iray satria tsy tiako olona hitsara ahy amin'ny taonako na ny endriko ivelany ny olona.”
Teboka iray mampirehareha an'i Sharma ny ivontoerana MLNS, ary tsy hoe fotsiny satria mafy ny adiny nanokatra azy io. Fanampin'ny fanomezana fanofanana sy otrikarena ho an'ireo sisam-paty, manome asa mandritry ny ora feno ho an'ireo vehivavy Delhi telo sy tarika iray ahitana ireo mpampianatra mifandimby ny ivontoerana. Olona iray avotra tamin'ny fanafihana tamin'ny asidra ihany ny iray amin'ireo mpiasa ireo.
Ireo olona avotra, tao amin'ny lanonana fanokafana ny ivontoerana Fanarenana Make Love Not Scars. Sary: Avirat Sundra
“Mahatsiaro mahazo aina tsara aho momba ny zotra izoranay “, hoy sharma. “amiko ho lasa tena fitaovana hentitra hanovàna ny fiainana sy ny ho avin'ireo olona voatafika tamin'ny asidra ny fisian'ny ivontoerana sahala amin'io.”
Ato anatin'ny folo taona, manantena i Sharma ny hahita hoe tsy ilaina intsony ny fikambanana izay tolona henjana no nametrahany azy. Ny nofinofiny? Miainga eto, mba hahazo fitaovana ilaina ireo olona avotra ireo hahafahan'izy ireo hanana fiainana mamokatra sy mahavelon-tena – ary hanjavona tsy ho hita amin'ny tontolon'ny kolontsaina ireo fanafihana asidra.